एसिया कपः उपाधिका लागि भारत र बंगलादेश भिड्दै, नतिजा कसको पक्षमा ? - Everest Dainik - News from Nepal
एसिया कपः उपाधिका लागि भारत र बंगलादेश भिड्दै, नतिजा कसको पक्षमा ?
काठमाडौं, असोज १२ । यूएईमा भइरहेको एसिया कपको उपाधिका लागि आज भारत र बंगलादेश भिड्दै छन् । खेल नेपाली समय अनुसार साँझ पाँच बजेर १५ मिनेटमा हुँदैछ ।
सात पटक एसिया कपको फाइनल पुगेको भारतले चार पटक उपाधि जितेको छ भने बंंगलादेशले एक पटक फाइनल खेलेको छ ।
याे पनि पढ्नुस लाग्नेले यौन सन्तुष्ट पूरा नगरेको भन्दै सासु ससुराविरुद्ध मुद्दा